Moments leh saaxiibo 13
Kuwa dhintay miyuu ku nool yihiin qoysaska, beelaha, iyo haddii ay sidaas tahay dawlad?
Kuwa nolosha ka taga waxay nastaan ​​nasasho ama dheere, baahiyadooda. Kadibna waxay sii wataan jiritaankoodii xaaladdii ka dambaysay sidii ay ugu noolaayeen dhulka. Laakiin waxaa jira kala duwanaansho, in nolosha adduunku ay u baahan tahay dhammaan mabaadi'da xubnihiisu ka kooban tahay nin adduunkan joogaa, ka dib dawladdu waxay u baahan tahay oo keliya gawaadhi ku habboon diyaaradda taas oo maanka, dhaqaalaha, shaqeysa.
Ninku wuxuu la noolaayey qoyskiisa ama beel kale oo dunidu ku jirto sida uu rabo, markaa sidoo kale waxay noqon doontaa rabitaankiisa inuu ku sii wado nolosha noocan ah gobolka dhimashada ka dib. Haddii uu doorbiday nolol keli ah, ama nolol u hibeeyey daraasad ama cilmi-baaris, markaa dooni maayo nolosha dadka kale; laakiin si kasta ha noqotee, siduu doonayay ha ahaadee nolosha jidhku, sidaas oo kalluuntiisuna way sii socon doontaa geerida kadib.
Dhimashadii ka dib, nin, isjecel, maskax, wuxuu kusii socdaa awooddiisa oo dhan, laakiin waa laga goynayaa jirka jirka iyo qaabka jirkaas. Meel kasta oo fikirkiisa iyo dantiisuba ku jirto ayaa ninku jiri doonaa. Markii, si kastaba ha noqotee, maanka waa ka go'ay adduunka iyadoo laga reebayo jirkiisa jir ahaaneed, heerka muujinta iyo xiriirka uu la leeyahay adduunka jireed waa la gooyaa ninku ma noqon karo jirka jirkiisa ee qoyskiisa ama bulshada ay qabsadeen. fikirkiisa. Haddii, si kastaba ha noqotee, fikirkiisa qoys ama beel ahaan wuu xoog badnaa wuxuu ku noqon lahaa ka fikir iyaga ama ku hay fikradiisa sidii mid laga yaabo inuu uga fikiro qoyskiisa ama asxaabtiisa intuu adduunka ku nool yahay inkasta oo uu ku nool yahay meel fog. wadanka. Isagu ma haysan doono fikrado cusub, mana heli doono macluumaad ku saabsan qoyska ama bulshada dhimashadiisa ka dib, ama kama noqon doono iyaga inuu ogaado mustaqbalkooda, sida mararka qaar si qaldan loo malaynayo. Geerida ka dib qofku wuxuu ku noolaadaa fikirro uu ku soo qaatay nolosha jidhka. Mar labaad ayuu ka fakaraa wixii uu ka fakaray intii uu noolaa.
Waxaa jira adduun fikir, kaas oo ah wixii ka dambeeya dunida oo dhan oo ninku runtii ku nool yahay xitaa isagoo jidh jidh ah, waayo adduunku isagay u tahay siduu u beddelo adduunkiisa fikirka. Laakiin waxaa jira adduun kale oo u dhexeeya adduunka fikirka iyo adduunka jireed ee la daroogo ama lagu sakhraamo. Rabitaanku wuxuu noqon lahaa qodobka ugu badan. Qalabka noocan oo kale ah wuxuu u dhaqmi doonaa si la mid ah tan ka sarreysa saamaynta daroogada ama khamriga. Si kastaba ha noqotee, damacgu iskiisuu isu muujin doonaa xitaa sida sakhraanku u muujiyo rabitaankiisa. Kaliya muuqaallo yar oo muuqaal ah oo jirka noocaas ah ayaa maskaxda ku haya. Sida maanka uu uraysan jiray nolosha qoyska ama nolosha bulshada sida ugu habboon adduunkiisa jireed, sidoo kale isla maanku wuxuu ku hayn doonaa qoyska ama nolosha bulshada fikirka ugu habboon adduunka xaaladdiisa geerida ka dib. Laakiin halka adduunyada jidheed nolosha ugufiican ay umuuqatay mid hadhsan oo mugdi ah iyo nolosha jidhka ahaaneed ee dhabta ah iyo tan dhabta ah, hadda xaaladdii waa laga beddelay; Dunida ugufiican ayaa ah tan dhabta ah jirkuna gabi ahaanba wuu baaba'ay ama si fudud wali waa mid aan fiicnayn.
Haa, waxaa jira dowlad ka dib dhimashadii dowladi. Gobol kasto markuu dhinto wuxuu leeyahay dowlad u gaar ah, qawaaniinta gobol kastaa waxay xukumaan gobolkaas. Sharciga rabitaanka gobolka waxaa lagu muujiyey magaciisa: rabitaan. Dunida ugufiican ayaa lagu xukumaa fikirka. Gobol kasta waxaa si otomaatig ah loogu xakameeyaa damac, ama fikir ku habboon, midkastaba sida ay tahay dabeecaddiisu tahay, iyo wax kasta oo ku saleysan caddaaladda
Ma jiraa ciqaab ama abaalmarin ku saabsan falalka ay sameeyeen kuwii dhintay, inta ay nool yihiin ama dhimashada ka dib?
Haa, fal kastaa wuxuu keenaa natiijo u gaar ah, iyadoo la raacayo ficilka iyo ujeedada iyo fikirka kiciyay ficilka. Kuwo badan oo ku dhaqma adduunkan waxay ku kacaan si aan ula kac ahayn, si kastaba ha noqotee ficilku wuxuu keenayaa abaalmarintiisa ama ciqaabtiisa. Qofka keenaya qoriga uu ogayn inuu garaacayay oo farahiisa ka tuuraya, ama gacanta saaxiibkiis, ayaa ku dhaca natiijooyinka jidh ahaan illaa iyo intuu toogtay isagoo doonaya inuu dhaawaco. Ciqaabta jirku waa isku mid. Laakiin isagu uma silco ciqaabta maskaxeed ee u dhiganta sida qoomamo, oo uu ku xanuunsan doono haddii uu ficilku sameeyo isagoo aqoon u leh waxa dhici doona.
Tani waxay khusaysaa su'aasha inta aad ku nooshahay adduunka jirka. Laakiin waxaa jira dhinac kale kaas oo ah dhimashada gobolka ka dib. Kuwa geerida gobolka ka dambeeya waxay kaliya u dhaqmaan sida saameynta ka dambeysa sababaha. Dunidan waa adduunka sababaha iyo sidoo kale saameynta, laakiin dowladaha ka dambeeya waa kaliya saameynta. Jirka rabitaanku wuxuu sii wadaa inuu kudhaqmo geerida kadib marka loo eego xoojinta la oggol yahay inta lagu jiro nolosha jidhka. Sidaa darteed, falalka ay ku kacaan hay'adda asturan, ama xitaa maskaxda ku haya adduunkeeda ugu habboon, waa natiijo kaliya, maahan sababaha. Iyagu waa cawaaqibta sida abaalmarin ama ciqaab ficillada lagu sameeyay adduunka jir ahaaneed. Laakiin camalladan ayaan loogama abaalmarin ama ciqaabin.
Erayada “abaalmarin” iyo “ciqaab” waa ereyo fiqi ahaaneed. Waxay leeyihiin macno shaqsiyadeed iyo kalgacalnimo. Hadday tahay adduunkan ama adduun kasta, sharciga saxda ahi wuxuu tarjumayaa ciqaabta oo looga jeedo cashar la siiyay kan fuliya ficil qaldan. Abaal marintu waa casharka la siinayo kan fuliya ficilka saxda ah. Casharka loogu yeedhay ciqaabta ayaa la siiyaa jilaayaha si uu u baro isaga inuusan mar dambe qalad sameyn. Abaal marintu waxay baraysaa cawaaqibka talaabada saxda ah.
Xaaladda dhimashada ka dib, jirka rabitaanku wuxuu la mid yahay nin cunno cunno xoog leh leh, markii uusan awood u lahayn ama uusan helin fursad uu ku qanco rabitaankiisa. Jidhka jidhku waa dhexdhexaadka jirka jidhku ku qanco rabitaankiisa. Markii jirka rabitaankiisa laga xayuubiyo ama laga gooyo jirkiisa jirkiisa markuu dhinto, rabitaanka cuntada ayaa sii jira, laakiin malaha qaabkii lagu qancin lahaa. Markaa haddii damacyadu xoog badnaayeen oo ay ka heleen raalli ahaansho jir ahaaneed, dhimashada ka dib ayaa gaajada rabitaanka ah, ama gubashada rabitaanka, laakiin iyada oo aan la haynin wax lagu qanco ama lagu qanco. Laakiin maanka fikradihiisu sarreeyeen, wuxuu la kulmaa dhammaan farxadaha ka soo baxa dhammaystirka himilooyinkaas, maxaa yeelay waa adduunyada halka ay fikraduhu ka jiraan.
Sidaa daraadeed waxaan leenahay dhimashada ka dib waxay sheegaysaa ciqaab ama abaalmarin, ama inbadan oo si sax ah loogu yeedho, casharrada saxda ah iyo ficilka khaldan, sida natiijooyinka fikradaha, ficillada iyo ficilada la qabtay inta lagu nool yahay nolosha jidhka.
Miyay kuwii dhintay aqoon u leeyihiin?
Maya, iyagu macno ahaan uma galaan erayga. Dhammaan aqoonta ay maskaxdu hesho waa in la helaa inta ay ku nooshahay jidhka jirka adduunkan jireed. Waa tan meesha ay tahay inay ku kasbato aqoon hadii aqoontu tahay in la helo. Dhimashada ka dib waxaan u gudbi karnaa geedi socodka dheefshiidka ama hoos u dhigida, laakiin waxa kaliya ee dunidan laga helay, si la mid ah in dibi uu calalilo jeexjeexeeda intuu dilo, laakiin waxa keliya ee ay ku qaadatay uu ka soo qaatay duurka. Markaa wixii la soo maray waxaay kor u dhaafeysaa ama qodaysaa damacyadan, fikradaha, ama himilooyinka, taas oo ay abuurtay, horumarisay oo ay soo saareysay inta lagu guda jiro nolosha. Aqoonta dhabta ah ee adduunyada oo dhan waa in la helaa inta lagu nool yahay adduunkan. Hay'addu ma iibsan karto dhimashada ka dib wixii aysan aqoon inta ay nooshahay. Waxaa laga yaabaa inay weyneyso oo ay ku noolaato mar kale wixii ay ku gartay xilligii nolosha, laakiin ma heli karto aqoon cusub dhimashadeeda ka dib.
Miyuu miyuu garanayaa waxa dunidan ku socota?
Qaar baa laga yaabaa, qaar kalena ma yeeli karaan. Waxay kuxirantahay waxaan ula jeedno “kuwa dhintay.” Jirka damacyada dhulka waa qeybta kaliya ee qeybaha badan ee “kuwa dhintay” oo laga yaabo inay yaqaanaan waxa adduunka ka socda. Laakiin markaa way ogaan karaan waxa socda laakiin waxay la xidhiidhaan damacyada iyo damacyada ay soo mareen inta ay nolosha yihiin, iyo socodsiinta ay ku xidhan yihiin iyaga. Tusaale ahaan, jirka rabitaanka sakhraanku wuxuu ogaan lahaa waxa adduunka ka socda oo keliya ee la xidhiidho rabitaankiisa khamri iyo xitaa markaa oo keliya marka uu ka heli karo xaafadda iyo dadka qabatimay khamriga. Wuxuu ka heli karay xaafada by jiidashada dabiiciga ah ee jecel inuu jecel yahay, laakiin si uu u la kulmo waxa socda waa inuu ku sameeyaa jirka jirka qofkii cabba, taas oo uu ku sameyn lahaa inuu galo oo ka mashquulo kan khamriga cabba. jirka rabitaanka khamriga sakhraanka ah uma badna inuu ogaado waxa ka socda adduunka ee siyaasadda ama suugaanta ama farshaxanka, mana ogaan doono ama ma fahmi doontid daahsoonnada cilmiga xiddigiska ama cilmiga xisaabta. Maaddaama uu qof kastaa raadinayo bii'adda sida ugu habboon loogu wada qanacsan yahay adduunka jir ahaaneed, sidaa darteedna xubnaha jidhku waxay u soo jiidan karaan deegaan jireed oo ku habboon nooca ay doonayaan.
Su’aashu waxay tahay, ma garan karaan waxa ka socda xitaa degaannadaas? Jirka caadiga ah ee jirku awood u yeelan kari waayey, maaddaama aanu lahayn xubno jidh ahaaneed oo lagu arko waxyaalaha jidhka. Waxay dareemi kartaa rabitaanka waxayna u dhowdahay shayga ay ka muuqato, laakiin ma aysan arki karin sheyga ilaa ay gashay jirka bini aadamka oo ay u isticmaasho xubnaha aragtida ama dareenka kale si ay ugu xirato dunida jirka. Sida ugu fiican, jirka rabitaanka caadiga ah wuxuu arki karaa kuwa ka soo jeeda astral kaliya oo ah damacyada dunida jirka.
Maskaxdii gooysay xiriirkii ay la lahayd jirka una gudubtay adduunkeedii ugu fiicnaa ma ogaan doonto waxa ka socda dunida jir ahaaneed. Duniddeeda ugufiican ayaa jannadeeda u ah. Cirka ama dunidan ku habboon ayaa joogsan doonta inay sidan ahaato haddii dhammaan waxyaalaha dunida ku jira la yaqaanay. Fikradaha dunida ee dunidu waxaa laga yaabaa inay u yaqaanaan kuwa ka tegey adduunka ugu habboon, laakiin kaliya marka ay ujeeddooyinkaani isku mid yihiin, sida maskaxda lagu soo maray adduunka ugu fiican.
Sidee u sharaxdaa kiisaska ay meydka u muuqdaan riyooyin, ama dadka soo jeeday, oo ku dhawaaqay in dhimashada dadka qaarkood, guud ahaan xubnaha kale ee qoyska, ay u dhowdahay?
Riyo aan u sabab ahayn jir ahaan waxay ka timaadaa adduunka astral ama adduunka fikirka. Dhimashadda qof ku dhawaaqay riyo wuxuu si fudud macnaheedu yahay in kii lagu dhawaaqay inuu dhintey uu horey u dejiyay ama abuuray sababihii keenay inuu dhinto, sababaha markaa loo dejiyayna waxaa lagu muujiyaa dunida astral. Halkaas waxaa laga arki karaa sawir ahaan; dhammaan duruufaha geerida xitaa waa la arki karaa haddii la raadinayo. Marka riyooyinku, geerida ku dhacda, sida lagu dhawaaqay, ayaa loo arki karaa qof kasta oo la soo xiriira fikirka hadda jira ee sababay sawirka. Xaalada qof uu riyada kaga muuqdo waxay ka dhigan tahay in muuqaalka noocan ahi uu jihaynayo dareenka midka riyada ku jira geerida soo socota. Tan waxaa loo sameyn karaa ama iskuday lagu xakameynayo geerida, ama in loo diyaariyo midka loogu talagalay, ama tusaale ay tahay kuwa ay aad u danaynayaan.
Mabda 'isku mid ah ayaa ku lug leh kiiska halka kuwa dhintay ay ka soo muuqdeen oo ku dhawaaqayaan dhimashada soo socota mid kale qof soo jeeda, marka laga reebo in indhaha qofka ay dareemi doonaan muuqaalka, ama dareenka astralka ee dhakhso u garto garashada muuqaal. Sababaha isku midka ah ayaa la dabaqi doonaa. Laakiin farqigu wuxuu ahaan lahaa in halka maskaxdu ay ku aragto riyo si ka muuqata nolosha hurdada, sidaa darteedna astral maha uma baahna cufnaan, muuqaalku waa inuu ahaadaa mid si aad ah loogu dhawaaqo oo dareenka jireed la keeno ciyaarta si loo garto. Kuwa dhintay ee sidaas u muuqday waxay noqon doonaan jirka rabitaanka kaas oo xiriir la leh ama si uun ula xidhiidha kii uu ku dhawaaqay dhimashadiisa. Laakiin dadka oo dhami inay ku dhintaan markasta ma dhintaan sidii lagu dhawaaqay. Tan macnaheedu waa (marka qofku aanu khiyaanayn khiyaanada) in sababaha gebi ahaan ubaahan geerida aan dhab ahaan laga saarin, laakiin dhimashadu way sii socon doontaa haddii aan la soo koobi karin mooyee. Marka ficilka saxda ah la qaado geerida waa laga noqon karaa.
Miyuu dadka dhintay u soo jiidatay xubno ka mid ah qoyskiisa halka ay joogaan dhulka, oo ay ilaaliyaan iyaga; miyaanay hooyada ka tagtay carruurteeda yar?
Waxaa suuragal ah in mid ka mid ah xubnaha reerka ka tagay inuu soo jiito mid ama dadka kale ee reerka ah haddii uu jiro rabitaan aan la qancin kaasoo xoog badnaa intuu noolaa. Sida, tusaale ahaan, qof raba inuu u gudbiyo gabal hantidiisa wixii kale ee uu haystay noloshiisa khiyaanada. Isla markii la gaadhsiiyo gudbinta, ama midkii xaq u lahaa ku-lahaanshaha lahaanshaha saxda ah, rabitaanka ayaa la fulin doonaa oo maanka ayaa laga xoreeyay silsiladdii haysatay. Xaaladda hooyada ee ilaalinaysa carruurteeda, tan ayaa suuragal ah keliya marka fikirku aad u xoog badan yahay inta lagu jiro nolosha iyo daqiiqada dhimashada si maskaxda hooyadu ugu hayso xaaladaha carruurteeda. Laakiin tan waa in loo furfuro si hooyadu xor u noqoto oo carruurta loo oggolaado inay ka shaqeeyaan masiirka ay ku abuureen noloshii hore. Ka dib markay u gudubtay adduunkeedii ugu fiicnaa ama cirka, hooyadeed way tagtay wali waxay ka fikirtay carruurta gacaliyaheeda ah. Laakiin fikirka carruurteeda laguma carqaladeyn karo xaaladdeeda wanaagsan, haddii kale gobolka kuma fiicna. Hadday carruurtu xanuunsato iyadu ma ogaan karto iyada la'aanteed silica nafteeda, silicaana boos kuma laha adduunka ugu fiican. Dhibaatadu waxay qayb ka tahay casharadii iyo waaya-aragnimadii nolosha oo ay maskaxdu sidaa u silica ku kasbato aqoon waxayna barataa sida loogu noolaado loona fikiro loona dhaqmo. Waxa dhaca ayaa ah in hooyadu, iyada oo ka fikireysa carruurta gacaliyaheeda, ay ku saameyn karto fikirka. Iyagu kama ilaalin karto daryeelka jirkooda, laakiin waxaa laga yaabaa inay ku gaarto hamigeeda sare inay fikradahaas u gudbiso marka fikirradooda iyo noloshoodu ay ka jawaabi doonaan. Sidan oo keliya uma noqon karaan carruurta waaliddiinta kuwa ka tagey, ee ku sugan adduunyada ama jannada ugu habboon, laakiin dhammaan saaxiibbada ka tagtay way caawin karaan kuwa hadda ku nool adduunkan haddii ujeedooyinka kuwa baxsaday ay ahaayeen kuwa sarreeya oo sharaf leh intii ay xiriirka iyo saaxiibtinimada nolosha jireed.
Dunida dadka dhintay waxaa jira qoraxda iyo dayaxa iyo xiddigaha sida adduunkeena?
Maya, dhab ahaan maahan. Qorraxda iyo dayaxa iyo xiddigaha ayaa la sheegay inay yihiin maydad jidheed oo dunida guud ahaan ku jira. Sidatan oo kale lama arki karo, lamana arki doono sidan, dhimashada ka dib; waayo in kasta oo fikirka iyaga lagu qaado maskaxda ka dib dhimashad fikirku wuu ka duwanaan lahaa waxyaalaha. Khabiirka cilmiga xiddigta oo fikirkiisa uu ka qaatay gebi ahaanba daraasaddiisa intii uu noolaa, ayaa laga yaabaa inuu dhinto ka dib inuu wali ku sii dhex jiro mawduuca, weli ma arki doono dayaxa iyo xiddigaha, laakiin kaliya fikirradiisa ama fikradahooda. Qorraxda, dayaxa iyo xiddiguhu waxay u soo bandhigayaan dadka dunida ku nool saddex nooc oo iftiin kala duwan oo xoog ah iyo xoog ah. Iftiinka dunidan jirkeenna waa qorraxda. Qorraxda la'aanteed waxaan ku jirnaa gudcurka. Geerida ka dib maskaxdu waa iftiinka iftiimiya dunidooyinka kale maadaama ay waliba iftiimin karto jirka. Laakiin marka maanka ama isku-tagga uu ka baxo jirkiisa jir ahaaneed wuxuu ku jiraa gudcurka iyo dhimashada. Marka maskaxdu ay ka go'do jidhka rabitaankiisa, jidhkaasi isaguna gudcur buu ku jiraa waana inuu dhinto. Marka maskaxdu u gudubto heerkeedii ugu fiicnaa waxay ifinaysaa fikradaha iyo fikradaha muuqda ee nolosha. Laakiin qoraxda jireed, ama dayaxa, ama xiddiguhu, kuma shidi karaan iftiinka dhacdooyinka dhimashada ka dib.
Miyay suurtagal tahay in kuwii dhintay ay saameyn ku yeeshaan noolaanshaha iyada oo aan aqoonta nolosha, iyagoo soo jeedinaya fikrado ama camal?
Haa, waa suurtagal waana inta badan dhacda in maamullada aan aragga lahayn ee ay damacyadoodu xoog badnaayeen oo noloshooda laga jaray ay joogaan joogitaankooda dadka u nugul, in ay galaan dambiyo ay iyagu aan sameyn laheyn saameyn la'aan. Tan macnaheedu maahan in ficilku gabi ahaanba ka dambeeyo hay'ad awood leh, ama ma tilmaamayso dambi la'aanta qofka galay dambiga salka ku haya saameyntiisa. Waxay si fudud macnaheedu tahay in hay'adda fadhida ay raadinayso ama soo jiidan karto midka ay u badan tahay in la saameeyo. Midka ay u badan tahay in la soo jiito waa in uu ahaadaa mid dhexdhexaad ah oo aan lahayn himilo sare ama xoog xagga akhlaaqda ah, ama mid kale oo fikradihiisu la mid yihiin kuwa awoodda isaga ka dhigtay. Tani waa suurta gal badanaana waxaa la sameeyaa iyada oo aan la ogeyn midka ku kaca ficil. Sidoo kale suurtagal ma aha in fikradaha, oo leh dabeecad sare, in loo jeediyo dadka kale, laakiin xaaladdan oo kale ma aha lagama maarmaan in loo dhinto fikradaha, maxaa yeelay fikradaha kuwa nool waxay leeyihiin awood aad iyo aad u ballaadhan oo ka sareysa fikradaha. kuwii dhintay.